WAALI: Kabo Uu Ku Ciyaaray Halyeey Michael Jordan Oo Lagu Iibsaday Nus Milyan Doolar | Laacibnet.net
WAALI: Kabo Uu Ku Ciyaaray Halyeey Michael Jordan Oo Lagu Iibsaday Nus Milyan Doolar
May 18, 2020 Balaleti
Kabo uu halyeeyga kubada kolayga Michael Jordan ku ciyaaray xilli ciyaareedkii 1985 markii uu u dheelayay kooxda Chicago Bulls ayaa lagu iibsaday lacag rikoodh u noqotay kabo iyadoo laga bixiyay in ka badan nus milyan doolar (560 kun doolar).
Shirkada Sotheby ayaa ku dhawaaqday in tartan loo galay iibsashada kabahaan iyadoo dadka doonayay ay kala kala socdeen afar qaaradood iyagoo doonayay inay iibsadaan kabahaan oo midabkoodu yahay casaan, cadaan iyo madow oo uu saxiixay 57 jirka Michael Jordan.
Dadka ku tartamayay iibsashada kabahaan oo da’doodu u dhaxeysay 19 ilaa 50 sanno ayaa 20kii daqiiqo ee ugu danbeeyay xaraashka sarre u qaaday qiimaha kabaha iyagoo ku daray 300 kun doolar.
Kabaha duugoobay waxaa markii qore ay shirkada Sotheby ku qiimeyneysay 150 kun doolar.
Laakiin kabaha Michael Jordan ayaa jabiyay rikoodhkii hore ee 438 kun doolar ee kabo lagu iibsaday sannadkii hore iyadoo lagu iibsaday kabaha kaliya ee noocooda oo kale aan dunida lagu arkeynin ee ay soo saartay shirkada Nike sannadkii 1972 ee loo yaqaano Moon Shoe, kuwaasoo loogu talogalay ciyaarihii Olimbikada ee sannadkaas.
Kabaha la iibsaday ayaa kala cabir duwan iyadoo lugta bidix ay cabirkeeda Mareykanka ay tahay 13 halka lugta midig ay tahay 13.5 madaama Jodan uu xiran jiray labo kabood oo kala cabir duwan waayihiisa ciyaareed.
Halyeeyga kubada Kolayga ayaa haatan leeyahay nashqad kabo oo magaciisa ah oo ay soo saarto shirkada Nike taasoo aad looga jecel yahay dunida.